डा. कँडेललाई ‘एसियाकै उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक अवार्ड’ - A complete Nepali news portal based on news & views
डा. कँडेललाई ‘एसियाकै उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक अवार्ड’
८ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:३२ July 24, 2020 Roshan
काठमाडौं । भीमोदय मावि चितवनका प्रधानाध्यापक डा. हरिप्रसाद कँडेल एसियन लिडरशिप अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
दुवईको दुवई मलमा प्रधान कार्यालय रहेको संस्थाले जुलाई २१ का दिन आफ्नो अफिसियल पेजमा नेपालका डा. कँडेललाई अवार्ड विजेता भएको ब्यानर सार्वजनिक गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा खुसियाली छाएको देखिन्छ ।
स्मरणीय कुरा के छ भने डा. कँडेललाई गतवर्ष पीपी प्रसाई फाउन्डेसनले सन् २०१९ को नेपालकै सर्वोकृष्ट शिक्षक र प्रअ अवार्ड प्रदान गरेको थियो ।
त्यसैगरी डा. कँडेललाई कालिका नगरपालिका चितवन र शिक्षक संघ बागमती प्रदेशले पनि यस अघि उत्कृष्ट प्रअको रुपमा सम्मान गरिसकेको छ ।
यस एसियन लिडरशिप अवार्डको प्रायोजक संस्थाहरु क्रमशः world research council, world business foundation, American consumer society, IDMAS learning center, IJ RULA, United medical council/Business planet रहेका छन् ।
म २०५६ सालदेखि विज्ञान शिक्षकका रुपमा शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका डा. कँडेल २०६३ सालमा स्थायी, २०६९ मा द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुँदै २०७१ असारदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन् ।
फरक काम गर्न भन्दा पनि हरेक काम फरक ढंगमा गर्न मन पराउने डां कँडेल प्रअको भुमिकामा आउन साथ विद्यालयले छोटै समयमा कायापलट गर्न सफल भएको छ । केहीवर्ष अघि जिल्लामै गुमनाम विद्यालय डा. कँडेलको नेतृत्वमा आज मुलुककै उत्कृष्ट विद्यालयहरुको माझमा दह्रिन पुगेको छ ।
विद्यालयले हरेक कक्षामा सिसिटिभी, स्मार्ट बोर्ड र हरेक शिक्षकलाई एउटा–एउटा ल्यापटप निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । शिक्षकलाई खोजेर, स्लाइड बनाएर प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पढाउन अनिवार्य गरिएको छ । ४० हजार बढी किताबको सफ्ट कपि सहितको ई–लाईब्रेरीको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालयमा हरेक शिक्षकका लागि दराज, ल्यापटप, पिउने पानीका लागि फ्रिजको व्यवस्था गरिएको छ । अतिरिक्त कक्षा लिने शिक्षकलाई थप सुविधा साथै, शिक्षकहरुलाई दण्ड र सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षकहरुलाई पढाएको विषयमा गत वर्षको भन्दा नतिजा बढी ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । आफ्नो विषयमा सबै विद्यार्थीलाई ८० प्रतिशत बढी अंकसहित उत्तीर्ण गराएमा एक तोलाको गोल्ड मेडल दिने र कमजोर नतिजा ल्याए तल्लो कक्षामा पढाउन लगाउने, स्पष्टिकरण दिने व्यवस्था गरेका छौं । एक वर्ष कमजोर नतिजा ल्याउने शिक्षकले अर्को वर्ष सोही कक्षा पढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बालमैत्री डेस्कबेञ्च र कर्नर पुस्तकालय र कक्षाकोठामा दराज, जुत्ता दराजको व्यवस्था गरिएको छ विद्यालयमा । संस्थागत विद्यालयका अंग्रेजी माध्यमका जुन पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक छ, त्यो नै लागू गरिएको छ ।
प्रअ डा. कँडेल भन्छन्– ‘विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा शिक्षकको केही गुम्ला, अभिभावकको त सर्वश्व जान्छ’
दुई छोरीसँगै गइरहेका पत्रकारको गोली हानेर गरियो बिभत्स हत्या
काठमाडौँ महानगर पालिकाले धोबीखोला किनारमा अत्याधुनिक दुई पार्क बनाउदै